Ny lahatsoratr'i Anas Hassan momba ny Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Anas Hassan
Anas Hassan dia consultant amin'ny famolavolana drafitra ao amin'ny masoivohon'ny mpamorona marika Logo Poppin. Tena liana amin'ny fikarohana ireo fironana amin'ny famolavolana sary sy ny marketing nomerika izy. Ankoatr'izay dia mpankafy baolina kitra mafana fo izy ary mankafy sakafo hariva steak indraindray.
Ambasadaoro mangina amin'ny marika anao ny endrika
Talata, Oktobra 5, 2021 Talata, Oktobra 5, 2021 Anas Hassan
Ny endrika mahomby iray dia mety hanampy anao hihoatra ny mpifaninana aminao. Raha ny filazan'ny Design Management Institute, ireo orinasa nisafidy endrika mahomby dia naharesy ireo orinasa hafa manana endrika malemy amin'ny index S&P hatramin'ny 219%. Etsy ankilany, ny fanadihadiana nataon'i Tyton Media dia namintina ihany koa fa 48% amin'ny olona no mamaritra ny fahatokisan'ny orinasa amin'ny alàlan'ny famolavolana tranokala. Ireo statistika ireo dia mifanaraka amin'ny hevitry ny mpamorona sary malaza, Paul Rand izay nihevitra ny famolavolana ho mangina